Sandesh Prawah३० लाख संगठित सदस्य बनाउने माओबादीको लक्ष्य, देशैभरी जिम्मेवारी हेरफेर को कहा परे? - Sandesh Prawah
३० लाख संगठित सदस्य बनाउने माओबादीको लक्ष्य, देशैभरी जिम्मेवारी हेरफेर को कहा परे?
काठमाडौ- राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संगठन सुदृढीकरण अभियानमार्फत करिब ३० लाख ९४ हजार १६८ संगठित सदस्य, सदस्य र समर्थकलाई संगठित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पार्टीमा जिम्मेवारी नपाएका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर संगठनलाई सशक्त बनाउने माओवादीले निर्णय गरेको छ ।
सुदूरपश्चिममा ६ जना सहइञ्चार्ज
नारायणकाजी श्रेष्ठले पाए थप जिम्मेवारी
कुन नेतालाई के छ जिम्मेवारी ?
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जमा चक्रपाणि खनाल, सहइन्चार्जमा कुलप्रसाद केसी र हकिकुल्ला खान छन् भने अध्यक्षमा ओनसरी घर्ती र सचिवमा जगप्रसाद शर्मा छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा शक्ति बस्नेत इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जमा कालीबहादुर मल्ल, टेकबहादुर बस्नेत र महेन्द्रबहादुर शाही छन् । यस्तै अध्यक्षमा राजकुमार शर्मा र सचिवमा रामदीप आचार्य रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सम्मेलनतिर माओवादीको ध्यान
माओवादीले आगामी पुस १३, १४ र १५ गतेका लागि तय भएको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रदेश सम्मेलनहरूको निर्धारित मितिलाई यथावत् राख्दै पार्टी सदस्यता वितरण एवम् नवीकरण र वडा तथा पालिका सम्मेलनको मिति परिमार्जन गरेको छ । जसअनुसार पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरण असोज मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्नेछ भने टोल सम्मेलन कात्तिक ६ र वडा सम्मेलन कात्तिक १३ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । यसैगरी पालिका सम्मेलन मंसिर ४ गतेभित्र सकिसक्नुपर्नेछ ।
अब एक व्यक्ति एक पद
नेकपा माओवादी केन्द्रमा अब एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू गरिने भएको छ । हाल एकै व्यक्ति विभिन्न पदमा दोहोरिएको सन्दर्भमा अब भने पार्टीले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू गर्न लागिएको हो । सो व्यवस्था लागु गर्नका लागि विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लगिने माओवादीले निर्णय गरेको छ । यसैगरी संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले असोज पहिलो र दोस्रो साता बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गरेको संगठन सुदृढीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमा पनि आवश्यक निर्णय भएको छ ।
जसअनुसार एक वडामा कम्तीमा तीन वटा टोल समिति निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै एक टोलमा कम्तीमा ३ सेल गठन गर्ने, एक सेलमा ३ देखि १५ संगठित सदस्य रहने, तीन टोल समिति वा तीन सेल नभएमा त्यस्ता वडा वा टोल समिति संगठित समिति हुने पार्टीले निर्णय गरेको छ ।
कम जनसङ्ख्या भएका मनाङ जस्ता जिल्लाका पालिकाहरूका सम्बन्धमा भने प्रदेश समितिले विशेष निर्णय लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी एक टोल समिति वरिपरी कम्तीमा १५ जना सदस्य रहेको वाईसीएल र महिला सङ्गठनहरू बनाउनुपर्ने पनि प्रावधान राखिएको छ ।